Enterprise budiriro nhoroondo - Mika Pipeline Technology Co, Ltd.
Musi waGunyana 12, 2002, Jinchaoyang Mold Kambani yakavambwa.
Musi waGunyana 28th, 2016, iyo kambani yakashandurwa nenzira yekushambadzira yakagadzirirwa hunyanzvi hwekudyidzana tekinoroji kugadzira bhizinesi.
Muna 2017, nekuda kweiyo yakanaka yezvigadzirwa mhando, iyo yakasimbisa kwenguva yakareba mushandirapamwe hukama pamwe neyemukati makuru OEMs uye yakazivikanwa (semuenzaniso: GM Wuling, China FAW, BYD, Changan).
Muna 2018, wawana rusununguko rwekunze kwenyika.
Muna 2019, gadzira mushandirapamwe nevatengi kuMiddle East, inova Europe neUnited States.
Muna 2020,isu tinoronga kuzarura zvakanyanya epamba uye vekunze mid- kune yakakwirira-kuguma misika, uye nekuenderera mberi kuvhura yakakwirira-mhando zvigadzirwa zvigadzirwa kubatanidza chinzvimbo chayo muindasitiri. Iyo kambani yakaisa 20% yekutengesa kwayo semari yakakosha yekugadzira michina. Zvinotarisirwa kuti nhamba yakafanana yevashandi ichawedzera zvakapetwa muna 2022.
Musi waChikunguru 1, 2020, kuitira kuti isangane nezvinodiwa pamusika uye mushandirapamwe wekambani, yekambani yekambani Tianjin Jinchaoyang hose clamp Co, Ltd. yakanyoreswa zviri pamutemo zita rekuti Mika (Tianjin) Pipeline Technology Co, Ltd.